मूल्यवान काजुको फाइदा पनि मूल्यवान छन्, तपाईलाई थाहा छ कि छैन ? - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it कस्ता फल कतिबेला खादा धरै लाभदाइक ? केहि टिप्स
Up Next कुर्सीमा धेरैबेर बसिरहनु कति जोखिमपूर्ण ? जोखिम कसरी कम गर्ने ? जान्नुहोस्
उब्रेको भातको भेज फ्राइड राइस यसरी बनाउँनुहोस् ताकि भातको पोषकतत्व रहिरहोस्, भिडियो सहित
भिडियो पोस्टमा छ, अलिक तल हेर्नुहोला । भिडियो हेर्नु भन्दा पहिले तपाईले यो लेख पढ्नु भयो भने थप जानकारी प्राप्त…
सावधान ! यी ५ खानेकुरा धेरै खाँदा क्यान्सर हुनसक्छ
क्यान्सरको नाम लिनसाथ हामी थर्कमान हुन्छौं । भन्छौं, ‘यस्तो रोग त सत्रुलाई पनि नलागोस् ।’ क्यान्सर भयावह रोग हो, जसको…
लसुन जसको प्रयोग जाने यति धेरै रोगको जडी ओखती हुन्छ, के तपाईलाई सहि तरिका थाहा छ ?
प्राचिन समयमा धेरै संस्कृतिहरुले लसुनलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्थे । भारत र चीनमा लसुनलाई खान पचाउनको निमित्त अन्य विभिन्न परिकारमा…
जाडोमा हिटरकाे प्रयोग गर्नु हुदै छ ? सतर्क भएर गर्नुहोस्, जानसक्छ ज्यान !
पछिल्लो केही समययता तापमान घट्दो क्रममा छ । जाडोको कारण मानिसहरुको दैनिक कामहरु पनि प्रभावित बन्न पुगेका छन् । यस्तोमा…
सुन्दर र सफल जिवनकाे लागी गाैतम बुद्दकाे उपदेश
भगवान् गाैतम बुद्द बाैद्द धर्मका प्रणेता हुन् । अधिकाँश बाैद्द परम्पराले उनलाइ हाम्राे कल्पका एक सम्यक सम्बुद्दकाे रूपमा मान्दछन् ।…
आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार…
Gastric Pain: Causes and When to VisitaDoctor
यस्ता लक्षण देखिदैमा ग्यास्ट्रिक नै हाे भन्न सकिदैन , जान्नुहाेस् यी राेगहरू पनी हुनसक्छन्
पेट दुख्ने, पेट फुल्ने, पेट असजिलो हुने, मुख नमिठो हुने, खाना नपच्ने, खानसाथ दिसा लाग्ने, केही चिज खाएपछि अमिलो डकार…